Magaalada Shishi waxay sare u qaadeysaa qiimeynta iyo soo iibsashada qaab cusub ee soo saarista iyo soosaarka warshadaha
Magaaladayaga dhawaan waxaa laga bartay wax uruurinta magaalada shishi, rinjiyeynta iyo soosaarka warshadaha si loo dhiiri geliyo wax soosaarka iyo warshadaha rinjiga si “tayo sare leh, moodada cagaaran”, deegaanka “2020 sanadlaha shishi magaalo daabacaadda iyo dheehista (dhaqday) nidaamka gooldhalinta shirkadaha” (halkan hoose ka daawo loo yaqaan "nidaamka darajooyinka"), kadib markii la habeeyo oo la habeeyo nidaamka iyadoo lagu saleynayo asalka, lana kordhiyo maalgashiga shirkada & horumarka, horumarinta nidaamka cusub, sida tilmaamaha hogaaminta bulshada. Isla mar ahaantaana, daabacaadaha maxalliga ah iyo shirkadaha rinjiyeynta ayaa sidoo kale qaaday dadaallada lagu qabanayo bandhig iibsashada internetka iyo howlo kale oo lagu soo jiidanayo in ka badan 100 shirkadood oo alaabooyinka ceyriin ah oo laga soo saaro warshadaha daabacaadda iyo kuwa lagu shubo ee dalka oo dhan, si kor loogu qaado tayada iyo hufnaanta warshadeena daabicista iyo soo saarista magaalada waxaanan xoojineynaa tayada.
Samee tilmaamayaal hage cusub
Waxaa la soo sheegay in la habeeyay oo la habeeyay “nidaamka dhibcaha” oo ka kooban saddex qaybood: buundada aasaasiga ah, mashruuca dhibco dheeri ah iyo mashruuc hoosaad. Waxaa ka mid ah, cashuurta dhabta ah ee shirkadaha ganacsiga leh dhibcaha aasaasiga ah waxaa bixin doona waaxda cashuuraha, macluumaadka ku saabsan meheradda shirkada waxaa bixin doona waaxda Kheyraadka dabiiciga ah, macluumaadka isticmaalka tamarta shirkada ay kujirto korontada iyo uumiyuhu waa inay lahaadaan awooda. waaxda iyo shirkadda saarta uumiga, iyo macluumaadka ka bixitaanka biyaha shirkada (ay ku jiraan biyaha tuubada, biyaha iskood isu keena iyo biyaha warshadaha) waa in ay bixisaa shirkadda biyaha soo saarta.
Waxyaabaha lagu daray ama laga jaray ee ka kooban waxaa ka mid ah kor u qaadista farsamada, cilmi baarista iyo qaabeynta horumarka, qaabka ganacsiga, hagaajinta maareynta, baaxadda shirkada iyo xoog, hormarinta amniga, iwm. Tusaale ahaan marka la eego casriyeynta teknolojiyada, marka shirkada sanadlaha ah ee casriyeynta maalgashiga ay ka badato 1 million yuan, 0.1 dhibcood ayaa lagu dari doonaa 1 milyan oo yuan kasta oo la maalgaliyo, iyadoo ugu badnaan aan ka badneyn 3 dhibcood.0.5 dhibcood shirkadaha ganacsiga ee ku qalabaysan nidaamka gudbinta otomaatiga ee loo adeegsado dharka. Marka la eego r & d iyo naqshadeynta, xarunta farsamada, xarunta naqshadeynta warshadaha, sheybaarka muhiimka ah ee shirkadaha, iyo injineerinka meheradda iyo xarunta cilmi baarista teknolojiyada inta lagu guda jiro mudada ansaxinta waxaa lagu siin doonaa 0.2 dhibco heer degmo, 0.5 dhibco heer gobol, iyo 1.5 dhibcaha heerka qaran. Shirkad heer sare ah iyo shirkad tikniyoolajiyadeed oo cusub oo lagu daray 0.2, shirkad heer qaran ah iyo tikniyoolajiyad cusub oo lagu daray 0.5, shirkad gaar ah oo ku takhasustay gobolka oo lagu daray 0.2, sayniska gobolka iyo tikniyoolajiyada yar yar ee hogaaminta leh oo lagu daray 0.3, shirkad hal koox goboleed hal koob oo lagu daray 0.4, shirkad hal koox oo heersare ah oo lagu daray 1, iwm. Waxaa jira qaab ganacsi, dhiirrigelinta maareynta, xoojinta amniga iyo dhinacyada kale ee shuruudaha dheeriga ah. Dabcan, waxaa sidoo kale jira qodobo laga goyn doono, oo ay ku jiraan kiisaska xadgudubyada deegaanka, xadgudubyada amniga shaqada ama xadgudubyada amniga dabka dabka ayaa la baarayaa oo la maxkamadeynayaa, shirkadahana waa laga goyn doonaa qodobbada. Nidaamka qiimaynta, rajooyinka maxalliga ah inay hagaan daabacaadda iyo rinjiyeyaasha shirkadaha xagga tayada, dhamaadka-sare iyo moodada cagaaran.
Alaab-bixiyeha doorbida internetka
Daabacaadda iyo nuugista warshadaha ee Quanzhou, ma ahan oo keliya dhamaadka siyaasadaha, laakiin sidoo kale dhamaadka ganacsiga. Dhawaan, carwadii ugu horeeysay ee heer caalami ah oo caalami ah iyo shirkad caalami ah oo carwada ganacsiga ah oo ay soo saartey shirkad daabacan iyo midabaynta Shishi ayaa la qabtay. Waxaa la bartay in muddo 11 maalmood ah, meheradda ganacsiga e-commerce ay aragtay in ka badan 600,000 oo bog oo muuqaal ah, xulashada ugu caansan soo bandhigga ayaa aragtay in ka badan 350,000 bog oo muuqaal ah, iyo 30 warshadaha warbaahinta iyo websaydhyada portal ayaa soo sheegay in ka badan 300,000 oo bog bog. Daraasiin shirkado maxalli ah oo daabacan iyo midab soo saaraya ayaa ka qeyb qaatay bandhig iyo iibin intarnetka ah, waxayna ku iibsadeen koox iibsiga bandhigga iyo iibinta. Sida laga soo xigtay tirakoob aan dhameystirnayn, in kabadan 100 shirkadood oo kuwa cawinta ah oo ka caawiya kaalmaynta kaalmada dalka iyo dibeddaba, oo ay ka mid yihiin Zhejiang Longsheng, Chuanhua Zhili, Anoki, Zhejiang Boao, Zhejiang Wanfeng iyo wixii la mid ah, ayaa sidoo kale ka soo qeybgalay bandhigan, oo soo jiitay in ka badan 20,000 oo soo bandhigayaal gudaha ah iyo kuwo shisheeye.
Waxaa lagu soo waramayaa in qurxinta iyo kaabayaasha ganacsiga ee khadka tooska ah ay u dhisi doonaan aalad cusub oo loogu talagalay is dhex galka iyo isdhaafsiga ka dhexeeya dyestuffs, auxeraries iyo daabacaadda iyo rinjiyeyaasha shirkadaha, in la helo kanaal cusub oo loogu talagalay is-weydaarsiga iyo iskaashiga u dhexeeya shirkadaha waaweyn iyo kuwa ka hooseeya ee warshadaha. silsiladaha guriga iyo dibedda, oo waxaad siisaa fasal cusub oo isweydaarsiga iyo daraasadda ah ee u dhexeeya daabacaadda iyo rinjiyeyaasha shirkadaha iyo xirfadleyda wershadaha la xiriira.
Qabanqaabiyeyaashu waxay sheegeen in qiimaha hooseeya iyo ku haboonaanshaha riwaayadaha ganacsiga ee internetka aan la barbar dhigi karin kuwa khadadka tooska ah ku jira xaaladda hadda jirta ee ka-hortagga iyo xakamaynta cudurka faafa iyo dib-u-bilaabidda shaqada iyo wax-soo-saarka. Mid ka mid ah ganacsadeyaasha ayaa sidoo kale sheegay, soo bandhigida internetka iyo gorgortanka khadka tooska ah ee shaqaalaha wax soo iibsiga, shirkadaha ka ganacsada soo iibinta dheeh iyo waxyaabo kale. garashada isbarbardhiga tayada iyo qiimaha, kaliya maahan mid aad u sahlan, iyo alaab-qeybiyeyaasha la doorbido, alaabada la doorbido, hoos u dhigidda qiimaha wax iibsiga.